ဂိုဘီသဲကန္တာရ - ဝီကီပီးဒီးယား
↑ Sternberg, Troy (2015-01-26). "Contraction of the Gobi Desert, 2000–2012" (in en). Remote Sensing7(2): 1346–1358. doi:10.3390/rs70201346.
ကိုဩဒိနိတ်: 42°35′N 103°26′E﻿ / ﻿42.59°N 103.43°E﻿ / 42.59; 103.43
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဂိုဘီသဲကန္တာရ&oldid=453520" မှ ရယူရန်
မွန်ဂိုးလီးယားဘာသာစကား ပါဝင်သော ဆောင်းပါးများ
ဤစာမျက်နှာကို ၁၅ မတ် ၂၀၁၉၊ ၁၉:၄၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။